Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विराटनगरमा सय घरको भान्सामा पाइप मार्फत बायोग्यास जडान – Emountain TV
विराटनगरमा सय घरको भान्सामा पाइप मार्फत बायोग्यास जडान
विराटनगर, २४ साउन । श्री कृष्ण गौसेवा सेवासदनले उत्पादन गरेको बायोग्यास घरघरमा जोडिएपछि विराटनगर महानगरपालिकाका वडा नम्बर १४ का स्थानीय हर्षित भएका छन् । हाल गौसेवा सदन आसपासका एक सय घरको भान्सामा पाइप मार्फत बायोग्यास जडान गरिएको छ ।
केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरघरमा ग्यास पाइप जोड्ने बताउँदा हाँसोको विषय बनाइएको थियो । तर, अहिले मोरङको विराटनगरस्थित श्रीकृष्ण गौसेवा सदनले गौशालाबाट उत्पादित बायोग्याँस पाइपमार्फत स्थानीय एक सय घरमा जोडेर हेर्दा सम्भव छ भन्ने सावित गरेको छ ।
३३ बर्ष अघि स्वामी रामदासजी महाराजको प्रेरणाबाट स्थापना भएको गौ सेवा सदनबाट उत्पादित ग्यास आफ्नो भान्सामा जोड्न पाउँदा स्थानीय पनि उत्साहित छन् । बृद्ध भएका र दुध खाइसकेपछि सडकमा छाडा छोडिएका २ सय ७ वटा गाईको मलमुत्र संकलन गरी बायोग्यास उत्पदन गरिएको हो ।
ग्यास उत्पादनका लागि गौशाला परिसरमा ३ सय घनमिटर प्लान्ट जडान गरिएको छ । पाइपबाट वायो ग्याँस वितरण गर्ने योजनासहित डेढ वर्ष अघिदेखि यो परियोजना निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो ।
श्रीकृष्ण गौसेवा सदनका अनुसार २ सय ७ गाई र बाच्छा बाच्छीबाट दैनिक करिब २ हजार किलो गोबर निस्कन्छ । त्यही गोबरलाई जम्मा पारेर ग्यास प्लान्टमा राखिन्छ र त्यसैबाट पाइपमार्फत घरघरमा पु-याउने काम भएको छ ।
एलपी ग्यासभन्दा गुणस्तरयुक्त रहेको बायोग्यासको मूल्य पनि सस्तो रहेको छ । ग्यास प्लान्टका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सहयोग गरेको छ भने यसमा भारतीय प्राबिधिकहरुले प्लान्ट निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
बायो ग्यास उत्पादन गरेर उदाहरणीय काम गरेको गौसेवा सदनले गाई बिरामी भएमा उपचारका लागि चौबिस घण्टा पशुुचिकित्सकको समेत व्यवस्था गरेको छ । यती मात्र होइन गौसेवा सदनबाट उत्पादीत मल समेत देशका विभिन्न स्थानमा पु-याउने गरिएको छ ।
१ सय ७९ नेपालीलाई भारतको मणिपुरबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याइयो
सरकारलाई दबाव दिन आन्दोलनरत चिकित्सकद्वारा रक्तदान कार्यक्रम
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बुधवार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने
जनताका आधारभुत कुरा पनि सरकारले सम्वोधन गर्न सकेन : गगन थापा
सरकारको विरोध वा समर्थनको केन्द्र नबन्न संचार माध्यमलाई संचारमन्त्रीकाे आग्रह
हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
मुलुकमा समृद्धि स्थापित हुन प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी
ओली ज्ञानेन्द्र पथमा हिंडदैछन्, यो लालमण्डले सरकार हो : नरेन्द्रजंग पिटर (भिडियोसहित)
दिनहुँ जसो लुटिन्छन् नेपाली मलेसियाको विमानस्थलमा